Ebuntwaneni - isikhathi ukukhanya ezibalulekile futhi ezijabulisa kunazo zonke ekuphileni kwabaningi babo bonke abantu. Empeleni ebuntwaneni kwagcizelela izinduku ingane. Akekho njengokwamukelekayo kungase kudle isikhathi esengumntwana, futhi lo msebenzi noma imuphi umuntu omdala emhlabeni ukuba banikeze izingane zabo ithuba ngokugcwele ukufeza isikhathi okucebile ezimpilweni zabo. Lapho izingane zakho othanda ukuzibuka amafilimu zezingane - Zama ngaba nethuba ukuwabuka njalo. Indlela ukukwenza? Kulula kakhulu - ngokusebenzisa indawo thematic. Akusiyo imfihlo ukuthi cinema yezingane, kanye nomthelela omuhle emfundweni yezingane, njengoba emisebenzini enjalo siyohlale zokuziphatha, ebonisa kufanele iziphathe kanjani ilunga ehloniphekile emphakathini ngandlela thile isimo yasekhaya. Okunjalo izipho zezingane ezibonakala ayinzima, ezifana amabhayisikobho, labo abazokwazi kakhulu, ikakhulukazi imigomo didactic. ukunakekelwa okukhethekile uyakufanelekela amafilimu zezingane kusukela eSoviet Union, owathanda izingane kuze kube manje. izingane Modern nijabule njalo ukubukela amabhayisikobho izingane Soviet sika. Ukuze uthole i-movie noma iqoqo amafilimu zezingane, kufanele sibheke umthombo ezikhethekile, lapho ungakwazi ukuthatha izibonelo best of Soviet ifilimu wokusabalalisa.
Njengoba izindaba, izingane abathanda ukubukela amafilimu, igxile iqembu eminyakeni 2-12. Ngeshwa, kulezi zinsuku kancane ukwenza amafilimu izingane, kungakhathaliseki ukuthi bakahle, kuyilapho kungenzeka ukubuka amafilimu zezingane zase-USSR. Kujabulisa umntanakho a, isiqophi ezithakazelisayo ezinhle, okungase enze esikhathini esidlule yamuva, kubalulekile ukuya portal ekhethekile, ukunikela abasebenzisi ingobo yomlando umxhwele amabhayisikobho izingane Soviet sika. Ngaphezu amabhayisikobho, izingosi ziyakuvumela ukuthi usebenzise zona ukuba ulayishe izingoma kusuka amafilimu zezingane. Yenza i-oda amafilimu zezingane ulula. Uma ukhetha okukodwa noma ngaphezulu izithombe kumele kube kwamaminithi ambalwa umyalo futhi ushayele indlela elungile nokulungiselela. Cash on kwezidingo noma kokuthola oda ngenethiwekhi izinkampani yizimpahla-phambili i ezikhethekile - pair of izindlela owaziwa kwezidingo. Nokho, noma kunjalo, kukhona ithuba nokuxoxisana umsebenzi ukuthola izindlela zokubeka inkulumo. Uma ufuna ukuthenga movie zezingane, kunconywa ukuthi isebenzise isevisi ye-Intanethi okuyisipesheli hhayi kuphela ifa Ukukhetha eziningi, kodwa futhi okuhlangenwe nakho ubudlelwane.
Nangokucacile njengoba kusondela isikhathi kufike uNyaka Omusha ingenye kuphela umqondo ezisebenzayo ebuchosheni yabazali - zezingane izipho loNyaka Omusha. Kusondela uNcibijane liyakhuthaza kubonise sina ngalokho ukunikeza izingane zabo. Ukuze uthole ukumangala kangcono, kususelwa izithakazelo izingane. Ngokwesibonelo, lapho izingane zakho ibukeke amafilimu Soviet yezingane unganika ke kubo. Ukuqoqwa amafilimu izingane kungaba hlekisa ingane yakho. Lesi isipho hhayi kuphela iyathandeka, kodwa uyafundisa kakhulu. amafilimu yezingane uhlale isikhashana esithile didactic, ngakho ingane ngeke kuphela uyijabulele buka, kodwa futhi nakho okuhle, igxile ukwehlukana imigomo "can" futhi "abakwazi". Ukuze wenze lokhu isipho esikhulu, esanele ukwenza impela kancane - oda severshit ngoba iqoqo movie ku izinsiza ayisipesheli. Lapho ingane ithola ukumangala, kuba isiqiniseko ukuba ngibonge lesi sipho ezingalindelekile futhi kumnandi.
Imakethe indawo. ezingokoqobo zamanje
Ithempeli Yezulu (Beijing): incazelo, umlando, izici ezakhiwo. Uyithola kanjani ethempelini Ezulwini Beijing?
Izinwele udayi "Wella Illumina": umbala Palette, yokusetshenziswa futhi impendulo